कार्तिक ४ गते जनताले चाहन्छन् भने म देशको नेतृत्व लिन तैयार छु भनेका थिए । त्यसपछि चुपचाप बसेका पूर्वराजाले चुनाव देखे । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ र जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि छानेका छन् ।
यी जनप्रतिनिधिहरुले संघीयतालाई संस्थापन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सके भने दुर्घटना टर्नेछ अन्यथा पूर्वराजाको पूर्वघोषणा र वर्तमान देश दर्शनले उनको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । किनभने ०६३ साला जनआन्दोलन सफल भए पनि त्यसपछिका १२ वर्ष काला दिनका रुपमा अंकित हुनपुगे । राजनीतिक नेताहरुले आआफ्नै डम्फु बजाएर आलोपालो शासन गरे, देशको दोहन गरे, आमनागरिक पीडामाथि पीडा बोकेर बाँच्न बाद्य भए । तैपनि निर्वाचनले सुखका दिन देखाउला कि भनेर निर्वाचनमा हौसिएर सहभागी भए, जित्ने उनै थिए, उनैले जिते जो हिजोका दिनमा देशमा लुट मच्चाएका थिए । अव तिनको मती सुध्रेर सुशासन दिए त ठिकै होला, अन्यथा दुर्घटना हुनसक्छ । संविधान जारी हुँदैमा केही भएन, चुनाव हुँदैमा शान्ति र समुन्नति, सवलता र सुशासन स्थापित भइहाल्छ भनेर कसरी भन्ने ?
यही हप्ता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सपरिवार मध्य र सुदूर पश्चिम नेपालतिरको व्यक्तिगत भ्रमणमा जाने कुरो आयो । यो भ्रमणबाट त्यस भेगका आमनागरिकले प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्ने अवसर त पाउनेछन् तर राजनीतिमा लाभ के हुने छ ?
राजधानीबाट देशको नेतृत्व लिन तैयार छु भन्ने अनि केही नबोली पश्चिम नेपालको भ्रमणमा निस्कने, राजनीतिका लागि उत्सुकता छ तर यो भ्रमणबाट पूर्वराजा र आम नागरिकवीचको सम्बन्ध नविकरण बाहेक थप केही होलाजस्तो देखिदैन । कारण सम्पन्न चुनाव पनि त हो ।